Articles tagged 'dzuwa'
Zim Davis Cup team confident 6 March 2015 HARARE - The Zimbabwe Davis Cup team is oozing with confidence ahead of the Euro-Africa Zone Group II tie against Bosnia and Herzegovina which starts tomorrow at Harare Sports Club. The tie will see the two teams taking on each other in a best-of-five rubbers format from tomorrow up to Sunday ...
Dzuwa welcomes Davis Cup home tie 19 November 2014 HARARE - Non-playing captain Martin Dzuwa says Zimbabwe’s Davis Cup home tie with Bosnia and Herzegovina in March will help revive interest in the sport. Zimbabwe will host the European team in the 2015 Euro-Africa Zone Group II, the country’s first home tie in years. Home Davis Cup matches...
Dzuwa in false start 15 October 2014 HARARE - Zimbabwe’s top tennis player, Martin Dzuwa failed to impress on the second day of the Twenty Third Century Systems ITF Futures Tournament here yesterday. The Zimbabwe Davis Cup team captain lost 6-2, 6-0 to third-seeded South African Turker Vorster in a men’s singles match. “I play...
Zim up Davis Cup preps 29 August 2014 HARARE - Zimbabwe's Davis Cup tennis team has intensified preparation for the forthcoming Davis Cup Euro/Africa Zone Group III contest to be held in Cairo, Egypt, from September 8-13. Martin Dzuwa captains the side which also has United States-based Takanyi Garanganga and Benjamin Lock alongsi...